Liiska dalagyada duurjoogta ah iyo kuwa gudaha ee haadda guinea
Gowrka Guinea ma ahayn had iyo jeer digaag, annaga ayaa ka yimid Afrika, halkaasoo laga helay hargaha xoolaha guinea. Tan iyo markaas fowl guinea waa mid ka mid ah shimbiraha caanka ah ee guriga. Ma taqaanaa? Gawaarida Guinea waxay ahaayeen kuwo caan ah xilligii hore ee Rome iyo Giriiggii hore. Hilibka dabiiciga ah ee Guinea wuxuu leeyahay dhadhan qaas ah oo u eg hilibka hilibka, maaha wax uun in Ivan The Terrible lahaa hilibka shimbirta ah inay dhadhamaan.
Dhamaan kuwa ugu muhiimsan ee ku saabsan digaagduurka kobcinta guriga
Boodhadhku waa shimbir laga soo qaado koonfureed kuropatkovy. Dhererka shimbir qaangaar ah waa qiyaastii 20 cm, miisaankuna waa 150 g Dheddig iyo ragga ayaa ku kala duwan midabka. Labadu waxay leedahay gariirka madow-guduudka ah iyo gaduudan cas. Dumarku waxay leeyihiin barar dhegdheg oo cirridka ah iyo madow madow dhinacyada iyo qaybta hoose ee jirka. Badeecooyinka digaaga ee guriga ama dalka waa bedelka digaagga, taasoo macnaheedu yahay ukunta digaaga iyo hilibka.
Hilibka Wax-soo-saarka Heerka Digaagga
Digaagga, laga yaabee, waxaa loo aaneyn karaa digaagga ugu caansan Yurub. Waxaa la koray ujeedooyin kala duwan, gaar ahaan, waxaa jira digaagaha ukunta iyo tilmaamaha hilibka, iyo sidoo kale noocyada farshaxanka. Iyadoo ku xiran ujeedada, shimbiruhu si aad ah ayey uga duwan yihiin midba midka kale ee shuruudo badan, dibedda iyo gudaha.
Nafaqada nuqulada ee meesha ugu horeysa waa inay ka bilaabaan xulashada saxda ah ee nooca shimbirta: hilibka, isboortiga ama qurxinta - farxadda jimicsiga. Si loo helo geedi socodkii guuleysiga waa mid aad u muhiim ah xaqiiqda doorashada doorashada iyo abuuritaanka habka taranka. Waa lagama maarmaan in la abuuro shuruudaha ugu wanaagsan ee nolosha iyo xaaladaha taranka ee xayawaankaaga.
Hilibka xayrtu waa jilicsanaan, casiir leh, cunto caafimaad leh iyo caafimaad leh. Waqtiyadii hore, waxay ahayd mid ka mid ah digaagaha jecel boqorrada iyo boqorada. Maanta, roodhida hilibka ee Ruushka ma aha mid aad u caan ah iyo waa ganacsi caddaalad ah ee ganacsiga. Maqaalkani waxaan eegaynaa nooca caanaha ugu caansan ee xamaamka hilibka, iyo haddii aad si lama filaan ah u go'aansato in ay bilaabaan taranka sida shimbir, ka dibna waxaad ogaan doontaa taas oo jilicsan in ay fiiro gaar ah.
Talooyin loogu talagalay nuugista xamaamka
Dhaqanka ah ee ku xayawaanka caleemaha asal ahaan aad u dheer, inta badan dalalka dalalka Mediterranean. Cuntada xayawaanka ee muuqaalka iyo dhadhanka ayaa u eg hilibka shimbiraha duurjoogta ah - waa cunto cunno oo si sahlan loo isticmaalo, taas oo ku habboon caruurta yar yar. Maanta, dadka jecel digaaga ayaa aad u xiiseynaya in ay naas nuujiyaan, oo aysan noqon karin hiwaayad, laakiin sidoo kale ilaha dakhliga soo gala.
Sida loo sameeyo quudinta loogu talagalay digaagga guriga: barashada cunnooyinka digaagga
Caafimaadka ee digaagga gudaha iyo tayada ukunta si toos ah waxay ku xiran tahay nafaqada habboon. Waxtarkooda waxay ku xiran tahay. Haddii aad doorato cunto tayo sare leh oo isku dheelitiran oo lagu geynayo digaagga guriga, waxay ku dhalanayaan sanadka oo dhan. Maqaalkani wuxuu kuu sheegi doonaa sida saxda ah loo sameeyo.
Tilmaamaha loo isticmaalo isticmaalka adag ee "Gammatonic"
Marka digaagga digaagga inta badan waa inay la tacaalaan dhibaatada cudurkooda iyo horumarinta liita ee digaagga. Qasab badan oo badan ayaa ku dhinta bilaha ugu horreeya ee dhalashada ka dib, iyadoon loo eegin waxa aad qabato, daryeel kasta oo aad bixiso, ma awoodid inaad si buuxda uga fogaato tan. Si kastaba ha ahaatee, waxaad mar walba hoos u dhigi kartaa suurtagalnimada dhacdooyinka dhimashada, isla mar ahaantaana waxay ka qaybqaadaneysaa in aysan xoojin karin difaaca digaagga, laakiin sidoo kale horumarintooda ayaa sii kordha.
Tiknoolojiyada wax soo saarka ah ee loo gooyey dhadhanka gacmahooda
Mid ka mid ah sababaha digaagga loogu hayo deyrka, dabcan, qaadashada ukunta guriga. Si digaagadu u seexdaan meel aan la seexin, laakiin si aad u sameyso meel gaar ah, waxaad u baahan tahay inaad ka dhigto meel aad u soo jiidatid - taas oo ah mid raaxo leh, oo sahlan, oo fekeraya faahfaahinta ugu yar. Aan ka hadalno sida loo sameeyo qaabkana u samaynta digaagga.
Dhiigga digaagga ee taranka: Talooyin ku saabsan ilaalinta iyo quudinta
Maantana waxaan ka hadli doonaa waxa ka soo baxa digaagga casaanka ah, baro qawaaniinta sii kordhaya, haynta iyo taranka. Dhawaan, beeralay badan ayaa ka tagay broilers sababtoo ah difaac xumo iyo qiimaha hilibka yar, oo raadinaya bedel wanaagsan. Laga soo bilaabo maqaalkan, waxaad baran doontaa waxa loola jeedo taranka casriga loo qiimeeyo iyo sababta ay uga fiican tahay kuwa kale.
Sida loo daweeyo digaagga coccidiosis
Beer kasta oo digaag ah ayaa bilaabaya inuu u diyaargaroobo xaqiiqda ah in shimbiraha la jecel yahay aysan jirin wax sabab u ah qaadashada infekshanka qaarkood oo ay bilaabaan in ay si toos ah u dhecaan indhaheenna. Ma jiro wax xikmad caan ah oo dheh: digaagaha tiri xilliga dayrta. Laakiin dhibaatadu ma aha oo kaliya in digaaggu ay u nugul yihiin tiro badan oo cuduro halis ah, laakiin xaqiiqda ah in haddii qaar ka mid ah ay cadeeyeen calaamadaha si sahlan loo ogaado oo ay qeexayaan qaab daaweyn cad oo cad, qaar kalana waxay qarinayaan waqti dheer waxayna muujinayaan marka infekshanku wuxuu saameeyay dhammaan xoolaha.
Kicinta digaagga broiler: sifooyinka iyo sifooyinka quudinta
Horumarka degdegga ah ee tiknoolajiyada casriga casriga ahi wuxuu noo ogolaanayaa inaan buuxinno suuqa caalamiga ah oo leh tayo sare, faa'iido leh oo qiimo jaban. Kalluumaysatadu si joogta ah ayey uga shaqeeyaan Beelaha cusub ee sii kordhaya ee sifooyinka wanaagsan marka la barbardhigo digaagga purebred. Si loo go'aamiyo waxsoosaarka digaaga, saamiga cuntada lagu kharash gareeyo hal kiilo oo hilib ah ayaa la xisaabiyaa.
Wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato ku saabsan hoyga duurjoogta guriga
Malaha, maaha qof keligiis ah oo aan indhaha u haynin quruxda shimbiraha kibirka leh oo leh maskax weyn oo ka danbeeya dhabarka. Laakiin hal shay oo ay ku farxaan dhinaca, iyo kan kale - si ay u galaan taranta. Dareenka xaglaha ah si uu u helo guri dabiiciga ah ee daaqsinka ah marka ugu horeysa ee uu qaboobo su'aasha macquul ah "Sababta?". Jawaabtu waa caddayn: marka hore, waa raaxo farxad leh guriga; Marka labaad, waa hilibka iyo ukunta nafaqada ugu macaan; iyo saddexaad, waa fursad ay ku kasbato.
Sidee loo mamnuucay pheasants guriga
Dhaqdhaqaaqyada gurguurta ee guriga, sida ganacsiga beeraha, ayaa leh faa'iido iyo qasaaro. Haddii aad dalbato tiknoolajiyad sare oo aad dhageysato talada ganacsatada qibrada leh, waxaad si dhaqso ah dib ugu soo ceshan kartaa maalgashiga. Hilibka duufaanka duurjoogta ah ayaa muddo dheer lagu qiimeeyay ugaarsado sababtoo ah dhadhanka aan dhammeystirnayn.
Dad badani waxay jecel yihiin hilibka doofaarka ee dhadhanka, nafaqada iyo nafaqada yar-yar, taasina waxay kicisaa guryaha digaaga si ay u bilaabaan noocyada qaar ka mid ah turkiga ee qoysaskooda kuwaas oo siin doona hilib caafimaad iyo mid cunto ah qoyska. Waxaa jira noocyo turkiga oo leh heer sare oo wax soo saarka ukunta ah, waxay macno u tahay in ay helaan dadka doonaya inay helaan maalin kasta ukunta qoyan.
Sida loo isticmaalo "Solikoks" ee loogu talagalay shimbiraha barashada
"Solikoks" - daroogo ayaa kaa caawin doonta badbaadinta xayawaanka laga bilaabo coccidiosis. "Solikoks": sharaxaadda daroogada "Solikoks" waa xal gaar ah oo leh ficil fara badan, oo ka soo horjeeda noocyada kala duwan ee coccidia - dulin la'aanta qulqulka ah, galaya unugyada epithelial ee mindhicirka. Kani waa xayiraad xoqan oo adag oo ah midab huruud ah, oo loo isticmaalo hadal ahaan, sunta yar.
Noocyada iyo xeerarka ilaalinta iyo quudinta dhadhanka
Xaqiiqdii, digaagista ayaa ah, dareenka caadiga ah, digaagga caadiga ah ee loo sara kiciyo ukunta. Waxay leeyihiin murqo yaryar iyo baruur yar, waxay u isticmaalaan in ka yar feedhka hilibka, waxaana lagu gowracaa hilibka kaliya marka digaaggu "u adeego" ugu yaraan 2-3 sano. Xaaladdan oo kale, taranka daaqsinta ayaa leh waxyaallo qaas ah, oo aan ka wada hadli doono maanta.
Noocyada xayawaannada, sharaxaad iyo sawir
Meelaha, thanks to ay ku-fanaan-qaabeeya leh midabka dhalaalaya, waxaa loo arkaa shimbiraha ugu quruxda badan ee amarka Qoyska Kurovnyh. Waa ragga ka mid ah baadadaha dheer ee kala duwan ee daboolaya daboolka, oo leh qaab qaabaysan. Iskutalladu waxay u kala qaybsanyihiin labo dhalasho: Asian and African. Dhamaan dadka Dabiiciga ah ee Aasiya waxay u qaybsan yihiin barxada caanka ah ee caanka ah.
Mandarin Duck - sharaxaadda iyo sifooyinka taranta guriga
Qof kasta oo mar horay arkay duck mina duck wuxuu si toos ah doonayaa inuu ogaado magaca shimbir midab leh. Badanaa waxaa laga arki karaa xayawaanka, halkaas oo aad ku ogaan karto macluumaadka ku saabsan nooca shimbirku yahay duck mandarin, meesha uu ku nool yahay iyo waxa xiiso leh. Magaca dookada ugu quruxda badan ee duck ee dunidu ma ahayn mid miro citrus ah.
Tilmaanta noocyada iyo jilicsan ee xamaamyada leh sawiro
Markii la ogaaday shan kun oo sano ka hor dadka ku saabsan daadadka caalamiga ah ee soo socda, qoolleyda caaraddeed ee akhlaaqda ka dib waxay noqotay calaamad nabadgelyo iyo jacayl. Qoyska qoyan ee ballaadhan (inka badan 280 nooc) way kala duwan yihiin. Noocyada shimbirahan waxay ku kala duwan yihiin muuqaalkooda iyo meesha ay ku haystaan ​​dabeecadda, iyo sida ay ujeedada ujeedada hawlgalka loo xilsaaray.